Falanqeyn: Somalidu matahay shacab iska Qaban kara odaydhaqameedka xun? – Balcad.com Teyteyleey
Falanqeyn: Somalidu matahay shacab iska Qaban kara odaydhaqameedka xun?
Dalka Soomaaliya wuxuu dowlad la’aan noqday horraantii 1991dii wixii xiligaa ka danbeeyey waxaa adkaatay in la dhiso dowlad ka wada dhaxaysa oo la mid ah kuwa ay leeyhiin shacab yada kale ee dunida ku nool.
Wadamada uu dagaalka sokeeye ka dhaco way badan yihiin waxaase u badan kuwa ku yaala Qaaradda Afrika, qaarkood waxay isku dilayeen siyaasad, kuwana Diin iyo dhaqan, kuwana Qabiil. Dhamman waxaa la oran karaa wuxuu ahaa dagaal sokeeye oo dhax marayey dad isku wadan degganaa.
Waa wada ognahay in dagaal sokeeye soomaaliya ka dhacay waqtigan hada la joogo markaad qiimayso dhaqanka siyaasaseed ee bulshada soomaalida waxaa ugu daran kooxda la magac baxdey odey dhaqameed oo yah wareer ku haya shacabka soomaaliyeed
Aduunka aan ku nool nahay dadka waxaa ka dhaxeeya Heshiis bulsho oo loo yaqaan Dastuurka Qoran markaa dastuurka la qoro bulshadaa u ocodeyso markaa wixii ka dan beeya wuxuu noqdaa wax dadku heshiiyeey
Waxaana loo bixiyaa magaca Dastuurka Qoran
Sidaad wada og tihiin shacabka somaliyeed waxaa ku dhacay nasiib daro weyn waxaa kala Gumays tay dawlada kala gedisan oo dhibaato baden geliyey markuu kala qeyb sadey.
Arinkaa wuxuu keenay ilaa maanta inay helin Dastuur Qoran oo ka dhaxeeya soomaaliya oo dhan.
Waqtigii Gumaysiga Oday dhaqameedka Soomaaliyeed waxay door muhiima ku lahaayeen taariikhda dalka sida arimah nabadgelyada ,bulshada iyo siyaasada looga soo hor jeedo Gumaysiga.
Markii shacabka soomaaliyeed dawladoodii ka bur burtay oo dagaal sokeeyey dhex maray, Dadkii soomaaliyeed waxaa jahwareer galiyey Oday Dhaqameed jahila oo tuug ah oo hogaankii bulshada ka dhigay wax markasta u hiiliya dadka dhaqanka xun ee dhibaateeya bulshada.
Markaan Qalinka u qaatay Falanqeynta waxaan ogaadey in dhibka ugu citalopram costs fairly much on the market in general. But there are advantageous offers anyway! Buy it only for 0.76 USD and save big! badan ee shacabka soomaaliyeed ka hortaagan inay Dawlada wanaagsen dhistaan waa odey dhaqameedka beenta ah ee bulshadii soomaaliyeed madaxa isku galiyey arinkan waxay adag tahay in la saxo inta dadka soomaaliyeed difaacayaan Fikirka Qabyaalada ku dhisan.
cidda ugu horreysa ee eedda iska leh waa kooxda aan u bixiyey odeydhaqameedka waxay eegaaya danta reerkiisa, oo aan isku hawlayn danta guud. Haddii la dhaho aynnu sidaa samaynno waxa ugu horreeya ee maskaxdiisa ku soo dhacaysaa waa reerkaaga dani ma ugu jirtaa waxay barteen kalmada ah waxaa Taageerada kala noqonay Dawlada. Iyagoo aan Qarsaney Fadeexadaa Fidnada ah.
Iskana ilow in soomaaliya dawlad yeelato. Inta odaydhaqameed beenlow ah uu sharci dasruur u yahay bulshada soomaaliyeed. Su’aasha aan akhristayaasha aan waydiinayo waa wadanka soomaaliya Dastuur ma waxaa u ah odeydhaqameed?
Qore. Maxamed caalim
Halkan si toos ah (Live) 16:00-18:00 (Sweden) uga dhegaysta Idaacada Maanta ee Somaliweyn Radio Gothenburg Sweden